Shandisa zvizere chitubu uye mateti ekutsamwisa bhizinesi rako | Rayson
Shandisa zvizere chitubu uye mateti ekutsamwisa bhizinesi rako
* Rush kupurudzira kusvika kumagumo kuti uone chinhu chiri kutengeswa. Iyo yakapusa handbag dhizaini inoita kuti zvive nyore kutakura zvinhu. Kuve nemwana zvinoreva kutakura zvakawanda zvekushandisa mwana. Vanaamai vatsva vanoda kutora vana vavo kuti vazive kuti vanowana marii kuti zvinotora kuti vafambe sei. Kwete chete kutakura mwana, asiwo kuendesa zvese zvingangoda mwana kana achibuda;
Mukuwedzera, miedzo yemhuka yatove kufambira mberi; . Izvo FDA zvinogona kubvumira kudzidza kwakafanana. Kune itsvo, izvi zvinogona kureva kuenzanisa nhengo yevanhu zvinotsauka nezvemhando yekuongorora, uye kunyange kuenzanisa madhiri ekurapa neyechiratidzo chekuisa chesimbe.
Zvinoenderana neiyi: Gungwa Rokubuda rakatsiviwa 0. Mabhiriyoni gumi nemashanu. Mamiriro esainzi eAtlantic aTlantic anotenderera Iyi ndiyo nzira isina kusimba, zvichienderana nehuwandu chaihwo hwemagutsa;